Caqli: Xogta ugu Fiican ee Kaydinta Macluumaadka Maqalka Webka
Miyay qormadeydu ku qorantahay qoraalka Shiinaha?
Qaar ka mid ah websaydhiyadu waxay soo aruuriyeen su'aalo ku saabsan in Postgres ay qabato qoraalo Shiineys ah. Jawaabta su'aashan waa haa weyn. Marka la samaynayo xog ururin, appkaaga iyo darawalnimada diiwaanka ayaa ah laba arrimood oo wax badan u baahan. Postgres waa shabakadda websaydhka xogta la shaqeysa taageerada Unicode. In geeddi-socodka soo saarista xogtaada Postgres, tixgeli qeexitaanka sharxaadda UTF-8.
Postgres JSONB vs. NSQL database
NOSQL waa bilaash oo sahlan in la isticmaalo xog-ururin ku kaydisa xogta qaab furan. Tusaale ahaan, haddii aad soo saareyso xogta suuqyada maaliyadeed, waa inaad ka taxadartaa habka xogtaada loo kaydiyo. Tani waa halka ay dhibaatadu ka timaaddo. Diiwaanka NoSQL ma ka kooban yahay jeegga xog uruurinta. Haddii aad ka maqnayd talaabadaan, waxaad ku xiran tahay inaad haysato macluumaadka qaabab aan la aqbali karin.
Postgres, dhinaca kale, ayaa u oggolaanaya bloggers iyo suuqgeyga inay isticmaalaan xulashada xogta saxda ah. Postgres, dukaamada kaydka webka, macluumaadka la soo rogay qaabab binaryar ah. Diiwaankani wuxuu taageersan yahay labada HSTORE iyo JSON labadaba.
Postgres waa xog-ururin heer sare ah oo loo isticmaalo in lagu keydiyo tiro badan oo xogta lagu soo saaro luuqado kala duwan. Diiwaankaan waxaa loogu talagalay labada raadinta iyo shaandheynta labadaba. Postgres JSONB waxaa sidoo kale loo yaqaanaa maareynta luuqadaha luqadaha sida Shiinaha. Hawlaha kale ee Postgres waxaa ka mid ah:
Soo saarida xogta oo leh taageerada guud ahaaneed;
Si dhakhso ah u fulinta shaandhaynta iyo raadinta hawlaha;
Kaydinta macluumaadka habboon ee qaabaysan oo laga soocayo qoraalka HTML;
Dib-u-helidda xogta laga soo qaaday goobaha xoqidda oo ku kaydinaysa qaabab la akhristo;
Waa maxay sababta Postgres JSONB?
Daraasad wax ku ool ah waa in ay hagaajisaa taxanayaasha oo waxay u kala dhigaan xogta datasets kala duwan waqtiga dhabta ah. Ha u ogolaanin daahitaanada iyo wakhtiyada ay saameynayaan mashruucaaga burburinta. Postgres waxay isticmaashaa kooxo hiddesid ah si ay u jajabiyaan xogta macluumaadka kala duwan ee kaydka sahlan.
Xogta kaydinta ma aha dhammaantood ku saabsan waqtiga jawaab celinta iyo wakhtiyada. Dib u cusbooneysiinta qaabka ayaa dhan waxay qaadataa dhammaan. Isticmaal xarumo si aad u qaadatid walxaha hoosaadyada oo aad u joojiso dhajinta illaa intaad dhamaystireysid xogtaada. Tani waxay ka caawineysaa macaamiisha inay ku dhajiyaan miisaaniyado kala duwan hal mar.
Inaad muujisid shay caadi ah waligiis ma fududa. Iyada oo la adeegsanayo shabakadda Postgres websaydhka, waxaad si dhakhso ah u muujin kartaa waxyaabo caadi ah adigoo u kala saaraya mowduuc kale oo isku xiran oo isku xiraya diiwaanka iyadoo la adeegsanayo furaha qalaad. Tilmaame-yaasha muhiimka ah ee shisheeye si aad u hesho natiijooyinkaaga.
Miyaad mareegtey labadaba dukumentiyo iyo qaab dhismeedka muraayadaha caadiga ah marka kaydinta xogta waaweyn ee waaweyn? Looma baahna in laga walwalo tan. U dir Hawlgalladda JSON B ee shaqada kuu qabanaya. Iyada oo la adeegsanayo shabakada shabakada ee Postgres, waa inaan loo baahneyn dib u habeyn Source .